काँग्रेसमा मोहन बस्नेत सँधै अगाडी, हाउडे पनि कम देखिएनन् – खुल्लापाना
काँग्रेसमा मोहन बस्नेत सँधै अगाडी, हाउडे पनि कम देखिएनन्
by खुल्ला पाना
१२ मंसिर , बाह्रबिसे ।
बिरामी भएर अस्पतालको बेडमा उपचाररत रहँदा पनि म‍ोहनबहादुर बस्नेत काँग्रेस सिन्धुपाल्चोकको निर्वाचनमा अब्बल ठहरिएका छन् । शनिबार सम्पन्न भएको काँग्रेस सिन्धुपाल्चोकको प्रतिनिधि सभा १ को अधिवेशनको निर्वाचनमा बस्नेत अत्याधिक मत सहित बस्नेत प्रथम भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका हुन् ।
बस्नेत विगत १ हप्तादेखि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि काठमाडौंको नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत छन् । चिसोको कारण स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए । अहिले आफ्नो स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना सुवेच्छुकहरुलाइ जानकारी दिएका छन् ।
बस्नेतसँगै महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उनको प्यानलबाट प्रत्यक्षतर्फ ९ जना विजयी भएका छन् । कुल १ हजार ३४ मत खस्दा बस्नेत ८ सय २ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनकै प्यानलबाट प्रत्येक्षतर्फ डा. प्रेमध्वज लामा, हरिशरण श्रेष्ठ , श्रवणकुमार जिसि(विनोद), भोला बोहरा , राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ , विष्णु बहादुर खत्री , रामबहादुर लामा र जंगबहादुर लामा विजयी भएका छन् ।
उनले पटक पटक कारवाही गरेका उनी इतर खेमाका दोर्जे लामा हाउडे समेत महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चुनिएका छन् । उनको जितलाई सिन्धुपाल्चोक काँग्रेसमा ठुलो महत्त्वका साथ लिइएको छ । बस्नेत इतर खेमामा रहेका जिल्ला सभापतिमा प्रत्यासी रहेका भुपेन्द्र थापाले वडास्तरमै हार व्यहोर्दा लामाको जितले उनलाई शक्तिशाली नेताको रुपमा समेत उभ्याएको छ । उनी तरुण दलका जिल्ला अध्यक्ष हुन् । उनलाई बस्नेतले कारबाही गरेर समानान्तर तरुण दल बनाउदा समेत विधानत लामा नै पुनः अध्यक्ष बनेका थिए ।
काँग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा महिलाबाट लिलाकुमारी नेपाल, गेल्मु शेर्पा बुढाथोकी , शर्मिला घिमिरे खड्का र मसिना खड्का भण्डारी निर्वाचित भएका छन् । खसआर्य तर्फ युधिर पौडेल , रामकुमार थापा, आदिवासी जनजातितर्फ पासाङ नोर्बु शेर्पा , हिमाल कुमार श्रेष्ठ , ङिमा जाङ्मु शेर्पा निर्वाचित भएका छन् ।
अल्पसंख्यक कोटाबाट भने प्रेम लामा निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
Tags: काँग्रेस महाधिवेशनदोर्जे लामा हाउडेनेपाली काँग्रेसमोहनबहादुर बस्नेत
सिन्धु माओवादीमा ८ पालिका मात्रै टुङ्गियो
सिन्धु काँग्रेसमा कुन खेमाको कती जना महाधिवेशन प्रतिनिधि ?
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सकाे आईपिओ आँउदै
१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार
यसरी मोबाइलबाटै भर्नुस मध्यभोटेकोशीको शेयर
२१ बैशाख २०७८, मंगलवार
बाँडीयो महिला लघुवित्तको आईपीओ, नतिजा कसरी हेर्ने?
१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार
सिन्धुपाल्चोकमा को को भए नेकपा समाजवादी ?
१५ भाद्र २०७८, मंगलवार
गाई र हिन्दुराष्ट्र नछाड्ने राप्रपाको अडान
देउजा ओली पक्षको नेकपा सिन्धुपाल्चोक संयोजकमा चयन
राष्ट्रिय भर्चुअल तेक्वान्दोमा सिन्धुपाल्चोकलाई ३ पदक
मेलम्चीको पानी वितरणका लागि तयारी अन्तिममा
९ माघ २०७८, आईतवार
चौतारामा माघ १६ सम्म नागरिकता नबन्ने
हैबुङमा ढुंगाले थिचेर एकको मृत्यु
८ माघ २०७८, शनिबार
दोलालघाटमा लुगा छाडेर एक जोडी बेपत्ता
एमालेमा पहिरोः सुवास कर्माचार्यले छाडे एमाले
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक खुल्ला पाना डट कम द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू खुल्ला पाना डट कमका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।
सूचना विभाग दर्ता नं: २४४३/०७७-७८
प्रकाशक: सिङ्गाे नेपाल प्रा.ली.
सम्पादक: विजय नेपाल
ठेगाना: चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक
सम्पर्क नम्बर : ९८५११५३५४५
भोलिदेखि चौताराबाटै ई-पासपोर्ट(प्रक्रिया सहित)
नौ किलोमा बोलेरो दुर्घटना
© 2020 your website प्रकाशित/सर्वाधिकार सुरक्षित powered by : sastosite.com
© 2020 Ainapati News Powered by sastosite.com.